आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? – Khabar Silo
Posted on July 12, 2020 July 12, 2020 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
शुक्रबार ९२ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार रु १०० ले घटेर तोलामा ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ६६० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अधिकाशं महिलालाई २८ दिनको चक्रमा महिनावारी हुने गर्दछ । तर कहिलेकाहि २१ देखि ३५ दिनसम्ममा पनि महिनावारी हुनसक्छ । यो समयावधी पनि सामान्य हो ।
तर, बिवाहित महिला जो नियमित सहवासमा हुन्छिन् उनको नियमित रुपमा भइरहेको महिनावारी रोकिए गर्भ रहेको शंका हुने गर्दछ ।
प्रश्न हुन्छ, महिनावारीको कतिदिनमा गर्भ रहन्छ ?
कसरी थाहा पाउने
महिनावारी भएन वा हुनुपर्ने नियमित समय अनुसार भएन भने गर्भ रहेको हुनसक्छ । तसर्थ महिनावारी समयमा भएन भने गर्भ रहे नरहेको थाहा पाउन बजारमा रहेको बिभिन्न प्रेग्नेन्सी टेस्ट कीटको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यी कीटले महिनावारीको मिति नाघेपछि गर्भ रहेनरहेको थाहा हुन्छ । तर प्रेग्नेन्सी टेस्ट कीटबाट महिनावारीको मितिको न्युनतम पाँच दिनपछि प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
यसले समान्यतया महिनावारी हुनुपर्ने मितिको २ हप्ता अर्थात अन्तिम पिरियड भएको मितिको ६ हप्ता पछि मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ । तर नतिजा नआए १ हप्ता पछि फेरि टेष्ट दोहर्‍याउनु पर्छ ।
महिनावारीको कति दिनमा गर्भ रहन्छ ?
महिनावारी भएपछि महिलाको शरीरमा अर्काे अण्ड निस्किन्छ । यस्तोमा यदि ५ दिनसम्म
पीरियड चलेको भए त्यस लगत्तै पार्टनरसँग सम्बन्ध भएमा गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । तर महिनावारी भएको ११ दिनपछि शारीरिक सम्पर्क भयो भने यो समयमा गर्भ रहने सम्भावना सबै भन्दा अधिक हुन्छ ।
यदि अर्काे पिरीयड हुनुपर्ने मितिको १२ देखि १४ दिन अघिसम्म शारीरिक सम्पर्क भएमा यो समयमा गर्भ रहने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
गर्भवती हुदाँको लक्षणहरु :
– खान मन नलाग्नु
– अन्य समयमा भन्दा बढि वान्ता हुनु
– स्तन सारो वा दुखे झै हुनु
– धेरै पिसाब लाग्नु
– शरीर गल्नु, थकानको महशुस हुनु
– पेटमा ग्यास भरिए झै हुनु
– छातीमा जलन पैदा हुनु
– मुखको स्वाद बिग्रनु
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक, कुन देशको पैसा सटही गर्दा कति हुन्छ ?
Posted on October 25, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११९ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्री दर १२० रुपैयाँ १३ पैसा कायम गरेको छ । यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८९ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर ८९ रुपैयाँ ६८ पैसा छ […]
आज पनि बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज बुधबार पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य देशको विनिमयदर बढेको छ।आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ भने कतारी रियाल १ को खरिददर […]
बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
Posted on August 17, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं – मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार तोलामा एक सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज तोलामा ४ सय रुपैयाले बढेको हो । सोमबार प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९१ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज […]
अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना